Shiinaha Carruurta Kaamamka Ciyaaraha Ciyaaraha ayaa Soo Baxaya Teendhada Dibedda Carruurta Ciyaarta Teendhada Carruurta iyo soosaarayaasha | Sicilis
Carruurta Kaamamka Ciyaaraha Ciyaaraha ayaa Soo Baxa Teendhooyinka Dibedda ee Carruurta Ciyaarta Carruurta ee Teendhada Teendhada
Magaca Badeecada: Teendhada Midabada leh ee carruurta
Cabir: 94 * 94 * 106cm
● Dharka midabbada badan leh ayaa dhalaalaya oo soo jiidanaya carruurta da 'kasta leh, waxay qaban kartaa indhaha carruurtaada marka ugu horreysa waxayna gacan ka geysan kartaa kicinta maskaxda carruurtaada waxayna u abuureysaa meel gaar ah oo midab leh oo carruurtaadu ku nastaan.
Tent Teendhadan ciyaartu waxay ka dhigaysaa meel ku habboon carruurta inay ku ciyaaraan oo ku nastaan. Waxaa lagu dejin karaa guriga ama dibaddaba waxayna carruurta siin karaan dareen asturnaan iyo meel gaar ahaaneed iyadoo waalidiinta loo oggolaanayo inay la socdaan nabadgelyadooda.
● Si fudud loo dejiyo & loo laalaabo boorso fudud oo qaadaysa boorso loogu talagalay keydinta habboon.
Ide Fikradda Hadiyadaha Carruurta Weyn.
Ku maalgeli Ilmahaaga Waqtigiisa Madaddaalada ee Hal-abuurka leh Taleefishinka aan Taleefishinka ahayn, kan aan kiniinka ahayn, Hadiyadda aan laptop-ka ahayn. Haddii aad adigu leedahay ama aad u raadinayso hadiyad wanaagsan cunugga saaxiib ama xubin qoys, teendhada ciyaarta ayaa ah hadiyad weyn.
Ho Saacadda Farxadda leh: Carruurta waxaa lagu soo jiidan doonaa midab dhalaalaya midabka dhalaalaya ee midabka midabka midabkiisu yahay midabka midabkiisu badan yahay ee jilicsan ee ciyaarta kubbadda cagta waxayna jecel yihiin inay ku gurguurtaan albaabbada. Teendhada ku buuxi alaabada carruurtu ku ciyaarto ee uu jecel yahay oo cunugga madadaali saacado.
Design Naqshad adeegsade saaxiibtinimo: Cabbir: 94 * 94 * 106cm; Qol badan oo lagu ciyaaro! Waxay ka kooban tahay albaabbada dharka si loogu xafido kubbadaha gudaha godka kubbadda. Albaabaduhu waxay muujinayaan ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo iskuxir ah si loogu ilaaliyo markii la doono.
Ura Waara & Ammaan & Fudud Oo Nadiifi ah: Waxaa lagu sameeyay dhar raagaya oo tirtiraya nadiifinta nolol dheer oo madadaalo iyo madadaalo leh. Ku fiican ciyaarta gudaha iyo dibedda. Gurigeenna weyn ee cayaartu waa ka madhan yahay kiimikooyin waxyeello leh & ammaan u ah isticmaalka carruurta oo ay ku jiraan socod baradka iyo kuwa yaryar. 100% aan sun ahayn.
● Si Fudud Loo Dejiyo & La Laabo: Teendhadan soo ifbaxa waa mid aad u fudud in la dejiyo, si fudud ayaa looga soo bixiyaa dhammaan dhinacyada ciyaarta. Tilmaamaysaa ikhtiyaar kaydinta qalooca gaarka ah ee laalaabka fidsan iyo bacda sibraar ku habboon marka aan la isticmaalin.
Ift Hadiyad Kaamil ah: Fikradda wanaagsan ee ugu habboon Xisbiyada Dhalashada, dalxiisyada, xafladaha, iyo Sleepovers. Hadiyadahan socod baradka ah waxaa lagugula talinayaa hadiyadaha dhalashada iyo hadiyadda kirismaska ​​ee loogu talagalay carruurta carruurta socod baradka ah. Hadiyadda ugufiican ee loogu talagalay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ama 8 sano jir wiil ama gabar dhalatay.
Hore: 3ba 1 1 Guri-Barbaro / Dibad-Ciyaar Guriga Soobaxa Teendhooyinka leh Tunnel
Teendhooyinka Kaamamka Dibadda
9 ku jira 1 Kaambada Qalabka Badbaadada Degdegga ah ee Kaamka
Teendhada dusha sare ee Xtm, Bilowga Dabka Magnesium, Qalabka Badbaadinta Degdegga ah, Teendhada Dibadda ee Joogtada ah, Taambuugga la buufin karo, Bilowga Dabka Bilowga,